केटिएम आरसी २०० को नयाँ मोडल आइतबारदेखि शोरुममा उपलब्ध, मूल्य कति ? – Sandes Post
March 29, 2022 193
केटिएम आरसी २०० को २०२२ मोडल नेपाल आएको छ। आइतबारदेखि शोरुममा उपलब्ध यो बाइकको मूल्य ६ लाख ७४ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्ने आधिकारिक वितरक हंसराज हुलासचन्द्र एन्ड कम्पनी स्रोतले बताएको छ। जुन यसअघि कारोबार भैरहेको पुरानो मोडलको तुलनामा १५ हजार रुपैयाँले बढी हो। पुरानो मोडललाई कम्पनीले ६ लाख ५९ हजार ९ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो।
पुरानो मोडलमा १६ भन्दा बढी अपडेट गरेर ल्याइएको यो नयाँ मोडलको इन्जिन र पावरट्रेनमा भने कुनै फेरबदल गरिएको छैन। हलुका फ्रेममा आधारित रहि निर्माण गरिएको यो बाइकमा अपडेट गरिएको एलसिडी इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर थप गरिएको छ। यो नयाँ बाइकको ह्यान्डल बारलाई राइडरले आफू अनुकुल एड्जस्ट गर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी यसमा नयाँ एलइडी हेड लाइट, पहिलेका भन्दा अझै सार्प टेलगेड डिजाइन र हाई–स्ट्रेन्थ ह्विल दिइएको छ। यो नयाँ बाइकमा केटिएमले सुपरमोटो एबिएससमेत थप गरेको छ। जुन यसअघिका उच्च मोडलमा मात्र उपलब्ध रहँदै आएको थियो।
आरसी २०० को यो नयाँ मोडलमा १३.७ लिटर क्षमताको फ्युल ट्यांक जडान गरिएको छ। जुन यसअघिको मोडलमा जम्मा ९.५ लिटर मात्र रहेको थियो। यसको साथै यो बाइकमा ठूलो एयरबक्स, नयाँ स्टिफर, हलुका स्प्लिट स्टिल फ्रेम, नयाँ कर्भड रेडियटर र लेजर टेक्स्चरसहितको अनौठो विन्डस्क्रिन जस्ता फिचर्स थप गरिएको छ।
यो बाइकमा पुरानै मोडलमा उपलब्ध गराइएको २ सय सिसी क्षमताको लिक्वड कुल्ड सिंगल सिलिन्डर इन्जिनलाई निरन्तरता दिइएको छ। जसको अधिकतम पावर २४.६ बिएचपी र टर्क १९.२ एनएम रहेको छ।
Prevओहो !नेपालमै यस्तो प्रतिभा देखियो,मात्र १७ वर्षका युवाले बनाए उड्ने हेलिकप्टर (भिडियो हेर्नुस्)
Nextबिहे गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ ? राशी अनुसार कुन उमेरमा बिहे गर्दा शुभ हुन्छ हेर्नुहोस